डेढ हप्ताअगाडि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल अकस्मात् झैं तर सार्वजनिक जानकारीसहित नेपाल आएर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीसँग गोप्य विमर्श गरेर फर्किए । विदेशी राजदूतले नेपालको मन्त्रीका अगाडि उपरखुट्टी लगाएको फोटो देख्दा त झस्किने भैसकेको नेपाली समाजको मन यस घटनाबाट तरंगित नहुने कुरै आएन ।
दुई द्वन्द्वरत प्रतिद्वन्द्वी र महत्त्वाकांक्षी देशहरूबीच धेरै सन्तुलन मिलाउनुपर्नेमा ओलीले धेरै विलम्ब गरे । गोयलको आगमन त्यसैले सांकेतिक छ । त्यो संकेत सार्वजनिक जानकारीमा पुगोस् भन्न नै उनी छर्लंगै देखिने गरी आएका हुन् ।
सामरिक महत्त्वको गम्भीर प्रश्‍न
नेपाल सानो सानै छ । क्षेत्रफलले पनि, जनसंख्याले पनि र अर्थतन्त्रले पनि । नामले पनि, पहिचानले पनि र उद्यमले पनि । बौद्धिक सामर्थ्यले पनि, नैतिक शक्तिले पनि र दैनिक आचरणले पनि । तर अचम्म छ, यो सानो–सानो नेपालमा कम्निस्ट नामक जीवात् कतिबिधि हुन् ! यिनको संख्याको विशालताबारे सुन्दैमा त्यसैत्यसै भनन्न रिँगटा लागेर आउँछ ।
‘नेपाली फिल्म हलमा पैसा खर्च गरेर हेर्नु र ?’
‘म त खासै नेपाली फिल्म हेर्दिनँ ।’
‘एक महिना कुरौँ न, युट्युबमा आइहाल्छ नि ।’
‘टिकट र पपकर्न किनिदिने हो भने चैँ जान्छु, लान्छस् ?’
नेपाली फिल्म हेर्न जाऔँ भन्यो भने मेरा अधिकांश साथीको जवाफ यस्तै हुन्छ ।
नेपाली हिट फिल्म कसरी हिट भए ?
ब्रायन मोक्तानको नाम मैले पहिलोचोटि सुनेको कहिले हो, भन्नुस् त ? तपाईं छक्क पर्नुहुन्छ । जसको गीत गुनगुनाउँदै म हिँड्थेँ, उनै गायकको नाम मैले पहिलोचोटि सुनेको, उनले टिस्टामा हाम फालेपछि नै हो ।
त्यो फिलिंगो !
विरगन्जबाट राजविराज पुग्ने ‘स्वस्तिका ट्राभल्स’ चढेँ । मेरो छेउमा बस्ने यात्रीलाई एकजना कुर्ता–सुरुवाल लगाएकी महिलाले सोधिन्, ‘कहाँ जानुहुन्छ ? टिकट लिनुभयो ?’ ती यात्रीले भने, ‘छैन ।’ महिलाले पुनः भनिन्, ‘त्यसो भए भाडा दिनुस् ।’ ती महिला देखेर मलाई अचम्म लाग्यो । किनकि, यतिका वर्षसम्म मधेसी महिला कन्डक्टर मैले कहिल्यै देखेको थिइनँ । बस राजविराजतिर हुइँकिइरह्यो । उनी यात्रुको टिकट चेक गर्दै, पैसा उठाउँदै अगाडि बढिन् ।
घुँघट त्यागेर बसमा कन्डक्टर
२० औँ शताब्दीकी अंग्रेजी साहित्यकी एक आधुनिक लेखिका भर्जिनिया वुल्फले स्पष्ट रूपमा भनेकी छन्, ‘महिलालाई रचनात्मक क्रियाकलापका लागि आफ्नै कोठा चाहिन्छ ।’ विश्वप्रसिद्ध निबन्ध ‘एउटा आफ्नै कोठा’ मा उनले कुनै महिला लेखक बन्न चाहन्छिन् भने उनीसँग एउटा आफ्नै कोठा र केही पैसा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिएकी छन् ।
पारिवारिक बन्धनमा महिला लेखक
ती विगत मेरा सम्झनामा ताजै छन् । विगतप्रति बेइमान बनेर आफैँप्रति कृतघ्न बन्न चाहिनँ मैले । मैले आफूप्रति न बेइमानी गर्न रुचाएँ, न कृतघ्न रहन नै । कृतघ्नता बेइमानीको पराकाष्ठा मानेँ । त्यसैले बेइमानी गर्न चाहिनँ । बेइमानीको बाटो छोटो हुन्छ । अदृश्य हुन्छ । कुइरोभित्रको कागजस्तो त्यो बेइमानीको रूपै हुन्न । बेइमानीको स्वरूप हुन्न, आकार हुन्न ।
उमेरले सयको संघारमा हिँडिरहेका बलबहादुर बस्नेत बाग्लुङ गलकोट नगरपालिका–५ भैँसेमा वि.सं. १९७९ मा जन्मिएका हुन् । उनको बाल्यकाल गोठालो गएर बित्यो । उनले कहिल्यै विद्यालय टेक्न पाएनन् । १६ वर्षकै उमेरमा उनी गलकोटबाट गल्लाको पछि लागेर ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुन पुगे । खाली खुट्टा, कछाड र दौरा लगाएर गोरखपुर पुगेका उनी दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिए । त्यसवेला आफू मरिन्छ भन्ने एकरत्ति पनि नसोचेको उनी सुनाउँछन् ।
बलबहादुर बस्नेत : दोस्रो विश्वयुद्धका युद्धबन्दी
त्यसैको प्रतिच्छाया अनुहारमा अवतरित थियो । तर के पढ्ने, काँ पढ्ने, के गरेर पढ्ने ? थापत्तो नाइँ । तैपनि टिन–एजरवाला सपनालाई खोपडीमा खाँदखुँद पारेर हिँडेको थिएँ ।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस महामारीका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएसँगै नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । आगामी फागुन ७–१० का लागि निर्धारण गरिएको महाधिवेशन अनिश्चित बने पनि नेतृत्वका लागि नेताहरु आ–आप्mनै तरिकाले आन्तरिक तयारीमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
चुराको आवाजले बल्थ्यो चुला
चुलाको आगोले कहिले पोल्थ्यो लुगा
कहिले पोल्थ्यो औँला
चुरा बजाउँदै आगोमा पोलिँदै
माया पकाउँथिन् उनी गहिरो कसौँडीमा
कहिले डढाइनन् त्यो माया
कहिले उमालेर पोखिनन् त्यो माया
खै कसरी पकाउँथिन् पकाउँथिन्
न स्वादमा कमी हुन्थ्यो न बासनामा, न रङको मिठासमा
चुलो र आमा
मृथुलक्ष्मी रेड्‍डीलाई महिला उन्‍नतिका क्षेत्रमा धेरै पहल गर्ने समाजसेवीका रुपमा चिनिन्छ । उनी पहिलो सर्जन, भारतकी प्रथम महिला विधायक र मद्रास विधान परिषदकी पहिलो महिला उपाध्यक्ष बनेकी थिइन् ।
नारी शक्ति : भारतमा देवदासी प्रथा अन्त्य गर्ने डा. मुथुलक्ष्मी !
जनआन्दोलनमा हुँदा पनि उसले मलाई लुट्ने मनसुवा राखेको हो । सधैँजस्तै पहिले त फकायो, धेरै नै फकायो तर मैले मानिँन । धम्क्यायो, मैले टेरिनँ । हाम्रो कम्पनीको कमिसारसम्म पुगेको हो यो कुरा । र उसले आत्मालोचना गरेर फुर्सद पाएको हो ।
एउटा पर्याय निरन्तर युद्धको
लकडाउनको वेला घर फर्किएका नेपाली अहिले धमाधम भारत फर्किरहेका छन् । दशैंमा पनि यो क्रम रोकिएन, दशैंपछि त झन् सिमानामा भिड उर्लिएको छ, यो परिदृश्यले देशको कस्तो तस्बिर प्रस्तुत गर्दछ ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । कतिपय नेताले यसका लागि पहल थाल्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह पनि गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यतिवेला किन संसद्को खाँचो महसुस भयो ? यसबारे के प्रगति हुँदै छ ? नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहालले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग गरेको कुराकानी :
सदन बोलाउनेबारे गृहकार्य गरिरहेका छौँ : बालकृष्ण खाण
भारत र अमेरिकाबीच गत मंगलबार नयाँदिल्लीमा भएको टु प्लस टु वार्ताको तेस्रो चरण पूरा भएको छ । पहिलो वार्ता सन् २०१८ मा भएको थियो भने दोस्रो सन् २०१९ मा सम्पन्न भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका–भारत सम्बन्धमा जस्तो खाले तीव्रता देखिएको छ, त्यसमा यो वार्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
अमेरिका–भारत सहकार्य अर्थात् मजबुत सुरक्षा
जनकपुरमा नवरात्र प्रारम्भसँगै विभिन्न मठमन्दिर र शक्तिपीठमा विशेष भिड लागे पनि राजदेवी मन्दिरमा भने घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म महिलालाई दर्शन गर्न निषेध गरिने परम्परा कायमै छ ।
दशैं-तिहारको बिदाले नेपालीका लागि विशेष महत्त्व राख्छ । अरूबेला कामको चापले सास फेर्न फुर्सद नपाउनेले पनि दशैं-तिहारमा छुट्टी पाउँछन् । निजी तथा सरकारी कार्यालयहरू (अत्यावश्यक सेवाबाहेक) प्रायः सबै बन्दै हुन्छन् । सामान्यत: सरकारी कार्यालय दशैंमा पाँच दिन बिदा हुँदै आएको छ ।
पुरानै ढर्रामा बालसाहित्य !
स्वस्ति श्रीमद्‍राजकुमार कुमाररात्मज श्री प्राइम्‌मिनिष्टर याण्ड कम्यांडर इनचिफ जनरल जङ्गबहादुर कुँवर राणाजीबाट संवत् १९०६ सालमा तजविज गर्नु भयाको अंग्रेज पात्साहाको र हाम्रो सीवाना जोरियाको छ, यिनको फौज, पल्टन, खजाना, हातहतियार, मुलुक, दौलथ, आमदानी खर्च, थिति, बन्दोबस्त क्या रहेछ, पात्साहि तखत बेलाइत कहाँ रहेछ, लण्डन शहर कस्तो रहेछ,..
‘सम्पदा लडाइँ’ सम्पदा संरक्षणका लागि भएका लडाइँहरूको दस्ताबेज हो । विभिन्‍न व्यक्ति, निकाय तथा संस्थाहरूको स्वार्थका कारण सम्पदा मासिँदै र मिचिँदै गएकामा चिन्ता र दुःख व्यक्त गर्दै सम्पदा संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासहरूको इतिवृतान्त सम्पदा लडाइँमा पाइन्छ । सम्पदा बनाउन र बचाउन उपत्यकाका नेवार समुदायले गर्दै आएको मिहिनेतको पनि पुस्तकभित्र खुलेर प्रशंसा गरिएको छ ।
सम्पदा संरक्षणको लडाइँ
हामी लामो समयदेखि चाबहिल (बोलिचालीमा चाबेल) क्षेत्रमा बस्दै आएका हौँ । चाबेल सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न ठाउँ पनि हो । त्यसैले चाडपर्वका समयमा चाबेलमा आफ्नै किसिमको रौनक रहन्छ । चाबेल गणेस्थान मन्दिर र चारुमति विहारका कारण पनि त्यस क्षेत्रमा समयसमयमा विभिन्‍न जात्रा र पूजापाठ हुँदै आएको छ । झनै गुह्‍येश्‍वरी, पशुपतिनाथ र जयबागेश्‍वरी यही क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पनि चाडपर्वमा चाबेलमा रौनक बढ्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण हो ।
आज धेरै दिनपछि मौसम बदलियो । मन पनि बदलिएको छ । घरदेशबाट टाढा परदेशमा छु । दसैं शुरु भएको छ । युट्युवबाटै मालश्री धुन सुन्दैछु । मनमस्तिष्क नोस्टालजिक भएको छ ।
पहिलेपहिलेका दशैंमा हुने रौनक अचेल हराएको छ । जब म जीवनका केही कुरा बुझ्‍न सक्ने भएँ त्योबेला दशैंको रौनक अर्कै थियो । अहिले सबै निमिट्यान्‍न भएर मेटिएको छ, नमेटिएको त केवल सम्झनाका पाटाहरु मात्रै हुन् । ती पाटाहरु मैले चाहेर पनि बिर्सन सक्ने अवस्था छैन । जुन दिन ती सम्झनाहरु हराउँछन्, त्यो दिन हाम्रो जीवनको अन्तिम दिन हुनेछ, सायद !
यो दसैँ त्यो दसैँ
सात दशकअघिको कुरा हो । विसं २००७ साल कात्तिक तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा नेपालमा राणा विरोधी आन्दोलनले उग्ररुप लिइसकेको थियो । यही क्रममा राजा त्रिभुवन सपरिवार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । राणाहरुको सातोपुत्लो उड्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको पहिलो कार्यकाल
सुनसरीको इटहरीमा बस्ने विकेश कविन किताब पढिरहनेमा पर्छन्। लकडाउनपछि उनले 'वनको वैभवः जनावरको मनदेखि यौनसम्म’ देखि २०७६ को मदन पुरस्कार विजेता कृति 'महारानी' सम्म किने। साहित्य, इतिहास, दर्शन, पर्यावरण, संस्मरण, नियात्रा, शिक्षा लगायतका विधामा रुची भएको बताउने कविनले पुरानो किताबमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका 'आत्मवृतान्त’, ’जेल जर्नल’ अनि भैरव अर्यालको ’राजीनामा’ र केही कविता सङ्ग्रह पनि किने।
विजया दशमी, दशैं, दुर्गापूजा, दशहरा, नवरात्री आदि नामले विश्वका हिन्दुहरुले पर्व मनाइरहेका छन्। दुर्गाले 'राक्षस' महिषासुरको हत्या गरेको उत्सवका रुपमा यसलाई मनाइन्छ। तर केही वर्षदेखि भारतका केही ठाउँमा (नेपालमा पनि कहीँकतै) 'महिषासुर साहदत दिवस' मनाउन थालिएको छ। यो मनाउन थालिएको धेरै भएको छैन तर तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ।
किन मनाउन थालिएको छ महिषासुर सहादत दिवस, के महिषासुर राक्षस नभई राजा थिए?
यहाँ हामीलाई आफ्नो अशक्यता नै प्रिय छ,
त्यसलाई छोप्ने अहङ्कार नै प्रिय छ !
[कविता] तिमी को ?
१७ औँ शताब्दीको एउटा चित्रकला पटक पटक चोरिने चित्रकलामा परेको छ । चित्रकलाका लागि स्वर्णयुगका रूपमा मानिने त्यस अवधिका सिद्धहस्त चित्रकार फ्रान्स हाल्सको चित्रकला नेदरल्यान्ड्सको एक म्युजियमको भित्तोबाट नै हालै चोरी भएपछि यो तेस्रो पटक चोरिने चित्रकला बनेको हो ।
पटक-पटक चोरिएको चित्रकला | साहित्यपोस्ट
अचानकको दशैं | काव्यालय
दशैं बदलिएको कि हामी ?
भूपिनको दशैं र तिहार | काव्यालय
बिहेको समाजशास्त्रीय परिभाषाबारे न मलाई कुनै चासो छ न कुनै जिज्ञासा । मैले प्रस्तुत गर्ने बिहेको समाजशास्त्रीय विश्लेषण केवल गैरएकेडेमिक र चलेको भाषामा भन्दा अवलोकननीय र अनुभवजन्य विश्लेषण मात्र हो ।
बिहेको समाजशास्त्र | साहित्यपोस्ट
वंशावलीहरूमा पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी अनेक ऐतिह्य तथा कथाहरूको वर्णन पाइन्छ । ती मध्ये केही ता यो पुस्तकमा ठाउँ–ठाउँमा परेका छन् । यो अध्यायमा यसता केही अरू कथाहरूको संग्रह गरियेको छ । इन बाट पृथ्वीनारायण शाहका व्यक्तित्वका विषयका पनी धेर थोर प्रकाश हुनाले ई कुराको आफ्नै अनुपम मूल्य छ ।
पृथ्वीनारायण शाहबारेका रोचक किस्सा ! | साहित्यपोस्ट
त्यसबेला म किशोर नै थिएँ र मैले आफ्नो जीवनको बाटो खोज्न बाँकी नै थियो । एक साँझ मलाई न्युयोर्कका एकदमै दानी र धनी व्यक्तिको घरमा रातिको खाना खाने निमन्त्रणा आयो । खाना खाएपछि हामीलाई निमन्त्रणा गर्ने महिलाले आफ्नो घरको विशाल ड्रइङ रुममा लगिन् । कैयौँ अतिथिहरु अझै पनि आइरहेका थिए । त्यहाँको भव्य वातावरण देखेर त मलाई पसिना नै आयो ।
किताब अंशः मैले चिनेका आइन्स्टाइन | साहित्यपोस्ट
देशको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ, मुलुकले समृद्धिको दिशामा फड्को हान्छ, मुलुकमा कायापलट हुन्छ : आम जनअपेक्षा यो हो । विगतमा भोगिएका पटक पटक राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक भड्खालोको दिशातिर जाकिँदै जाँदा आमजनताले भोगेको अनुभूति पनि हो यो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकारले यो मान्यताको विपरीत नतिजा दिएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक बनेपाकी ११ वर्षीय गरिमा अधिकारी कक्षा-६ मा पढ्छिन् । लकडाउनले गर्दा विगत सात महिनादेखि विद्यालय खुलेको छैन । बालबालिका घरमै बसेर अनलाइन क्लास पढिरहेका छन् । अनलाइन क्लास पढेपनि विद्यार्थीहरूको दिउँसो र बिहानको धेरै समय फुर्सदमा नै रहन्छन् ।
चित्रकलामा रमाउँदै ‘गरिमा’
अविनाशले कतारबाट फोन गर्यो, ‘बाबा, म घर आउने भएँ दसैंमा ।’
घनश्याम खुसी भयो । छोरो अविनाश गाउँ नआएको पनि पाँच वर्ष भइसकेको थियो । कान्छो विवेक बुहारीसहित बिर्तामोडमा थियो । बुहारी दुई जीउकी छे, यो पालि दसैंमा घर आउन सक्दैनौं भनेर समाचार पठाएको थियो ।
कथा : गाउँ कहाँ छ ?
बाहिर झरी परिरहेको छ । झरीको अविराम संगीत र बा’को खोकी यसरी समवेत सुनिइरहेको छ मानौं कुनै शास्त्रीय संगीतको जुगलबन्दी भइरहेको छ ।
कथा : याचना
पुतलीसडकको सडक सफा र चौंडा थियो । फुटपाथ उत्तिकै ठूलो । छेउछेउमा रङ्गीचङ्गी फूल फुलिरहेका थिए । जाम थिएन ! ठाउँठाउँमा मेट्रो चढ्नका लागि मानिसहरू शान्त ढङ्गमा लाइन बसिरहेका थिए ।
यो मन्दिर परिसर कुनै क्यानभासजस्तो लाग्छ । यहाँ अनेक पात्रहरू अनेक रङ पोतिरहन्छन् । थपिँदै जान्छ रङ, कोरिँदै जान्छ एक गतिशील चित्र । समयजस्तो कुनै अर्को चित्रकार, अहँ सायद छैन ।
कथा : क्यानभासभित्र
सरकारले खरिद गरेको छ
देवकोटाको पुरानो घर
त्यसमा सामेल छैन
उनको विपुल काव्य
कविता : देवकोटाको घर
युद्ध जितेर फर्किएको
भीम मल्ललाई काटेर
उनकी युवा रानीलाई घिसार्दै
बागमतीको चितामा पुर्‍याउने
हातहरू जन्माउने देश !
विष खुवाएर रानीको छोरालाई मारेको
दोष थुपारेर आत्महत्या गर्न
बाध्य पारिएका भीमसेन थापाको देश !
पराजित, सार्वभौम नागरिकको
नाक–कान काट्ने देश !
कविता : ईश्वरवल्लभकी आमाले आत्महत्या गरेको देशलाई तपाईं चिन्नुहुन्छ ?
यातनाका अजस्र पहाडहरू नाघ्न सक्छ्यौ तिमी
तिमीलाई अरू यातना दिन मन छ- फेरि एकचोटि
चाहूँ त –
अहिल्यै हत्या गर्न सक्छु म तिम्रो
छुरी रोप्न सक्छु तिमीलाई
आगो या तेजाबले नुहाइदिन सक्छु
कुनै भीरको टाकुराबाट हुत्याइदिन सक्छु
गुडिरहेको गाडि अघिल्तिर धकेल्दिन सक्छु
तर, कसोकसो हत्यारा यी हातबाट..
कविता : फेरि एकचोटि
अखडा भनेको फटाहा, बदमास लुक्ने ठाउँ होजस्तो लाग्थ्यो । चोरहरूले चोर्न सल्लाह गर्ने कुनै गुप्तस्थान, बदमासहरूले कुनै उपद्रो गर्न योजना बनाउने एकान्तस्थान होलाजस्तो लाग्थ्यो ।
प्रिय अखडा !
म पाँचथरमा जन्मे–हुर्केको मान्छे । लिम्बू बहुल भए पनि पाँचथर मिश्रित आवादी भएको ठाउँ हो । केटाकेटी छँदा मिठो–मिठो (मासुभात) खान पाइने, नयाँ लुगा लाउन पाइने भनेर मैले दसैं मानें । पछि यो बाध्यात्मक हो भन्ने थाहा पाएँ । तर, हाम्रो मिश्रित बनोटको समाजमा परस्पर सद्भाव कायम राख्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सहिष्णुता आवश्यक पर्छ । त्यसैले नेपालीको पर्वका रुपमा मैले दसैं मान्दै आएको छु ।
‘यो दसैंलाई घरमै सीमित गरौं’
८० वर्षे चर्चित गीतकार कालीप्रसाद रिजालको मनमा ‘केही मिठो बात’ गर्ने तुलबुल घटेको छैन । जे जस्तो भयो जीवन, त्यसको गीत लेख्ने चाह छ । अन्यायविरुद्ध हुँकार गर्ने कविता लेख्ने हतार छ ।
कालीप्रसाद रिजाल : त्यही खसी चराउने, त्यही काट्ने !
आफुभन्दा होचा टाकुराहरुमा
सेता हिउँ जस्ताको तस्तै रहँदा
आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल पुरा गर्दा नगर्दै
नैतिकता गुमाएर सर्वाङ्ग नाङ्गो भए जस्तै
नैतिकताको सेतो टोपी
बिहानीको घाममा टलक्क टल्काएर मुस्कुराउने साइपाल..
कसरी नाङ्गियो साइपाल ?
उत्तर, दक्षिण, पश्चिमपट्टि तीनै दाउ खुला
च्याँखे उत्तिकै वैरिन्छन् कुनै साना, ठूला
आलाकाँचा पत्रकारको ढाँचाकाँचा देख्ता
कोजाग्रत पूर्णिमामा गुप्त जूवा मारे झैँ लाग्छ..
ठूला पदमा हामी बस्ने हामी मात्रै ठूला तिमीहरु ता जुत्ता ह्वौ, हामी श्रीपेच, ठूला
“श्री गणेशाय नमः”— यातना पुराणको तेस्रो अध्यायको द्वार खुल्यो । गरुड नामक पात्रको यम–मार्ग छिचोलेर यमालयमा पुगेको प्रेत–मनुष्यले कस्तो यातना भोग गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा श्री भगवान् नामक पात्र भन्न थाले, “हे कश्यवंशीय गरुडजी ! बहुभीति नामक अत्यन्तै डरलाग्दो सहरदेखि अगाडि चवालीस योजन ठूलो धर्मराज नगर छ, जहाँ ‘हा, हा, मर्‍यौँ !’ भन्ने हाहाकारले युक्त भएको पातकी चिच्याउन लाग्दछ । त्यसले कराएको सुनी यमराजका आठपहरियाहरू ‘ए ! यस्तो पापी आइपुग्यो भनी ढोकेलाई सुनाउँछन् ।”
हिन्दु कर्मकाण्डको छत्रछायामा हाम्रो परिवार चार जातमा विभाजित भयो । पुरोहित बाजे दाइहरूले पकाएको समेत पनि नखाने उच्च तहका शुद्ध ब्राह्मण भए । टुप्पीयुक्त चिन्डे टाउका लिएर आमाको काजक्रिया गर्न एउटै कोठामा कैद भएका दाइहरू मध्यम तहका ब्राह्मण अर्थात बाजेका दृष्टिमा क्षेत्री सरह भए । दाइहरूलाई पानी नचल्ने दिदी–बहिनीहरू मैले छोएको खान नमिल्ने बैश्य भए । र, कपाल खौरेर, लगौँटी भिरेर, टुप्पी हल्लाउँदै, पुरोहित बाजेका गोडामा ढोग्दै कोरामा बस्न इन्कार गर्ने म शूद्र भएँ । पुरोहित बाजेका दृष्टिमा दाइहरू अछूत, दाइहरूका दृष्टिमा दिदी–बहिनीहरू अछूत, र यी तीनै थरीका दृष्टिमा म अछूत ।
तपाईं दशैं कसरी मनाउनुहुन्छ?यसपटकको दशैं मनाउने सन्दर्भमा तपाईंले कुनै विशेष तयारी र योजना बनाउनु भएको छ कि?
म दशैँ मनाउँदिन । पारिवारिक र लोकदृष्टिमा असामाजिक नदेखिन केवल केही औपचारिकता निर्वाह गर्छु । यो असहमत सनातनसँग गरिने एक प्रकारको लाचार सम्झौता हो । गृहस्थ जीवनको पन्छाउनै नसकिने कठोर बाध्यता ।..
स्तम्भ​ को सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । प्राज्ञ तथा पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीको विचार :
तीनवटा पञ्चायतको पतनपछि पाँचवटा पैसातन्त्र
मुलुकभरका साढे तीन सयभन्दा धेरै केबल व्यवसायीहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई आत्मसात् गरेका छन् । खासगरी केबल टेलिभिजनहरुले यसलाई लागू गर्छन् कि गर्दैनन् भन्‍ने आशंका कायमै थियो । २०७६ कात्तिक ७ देखि एक वर्षे समय दिएर कार्यान्वयन गरिएको यो व्यवस्थाले आगामी केही वर्षभित्रै विज्ञापन बजार दोब्बर हुन्छ भन्ने चर्चा सुन्‍न पाइन्छ । त्यो कसरी हुन्छ ? हुन्छ या हुँदैन भन्‍ने आम चासोको विषय छ ।
‘क्लीन फिड’ कार्यान्वयनमा के भयो, के बाँकी छ ?
बीपी कोइराला सुन्दरीजल जेलबाट छुटेर क्यान्सरको उपचारका लागि अमेरिका पुगे । बीपी जेलमा रहँदा पेरिसमा रहेकी उर्मिला गर्गसँग बीपीको पत्र-संवाद थियो । उर्मिला सन् १९७० को दशकमा पेरिसबाट नेपाल फर्किएकी थिइन् । त्यसअघिको एउटा स्मरण उनलाई अझै ताजा छ । ०१६ सालमा प्रधानमन्त्री रहँदा बीपीले काठमाडौंमा उनको ‘सोलो पेन्टिङ एक्जिविसन’ (एकल कला प्रदर्शनी) पेन्टिङको प्रदर्शनी उद्घाटन गरेका थिए । त्यो क्षण उनी कसरी बिर्सन सक्थिन् र ?
स्तम्भ​ को सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् ।
निर्देशक तथा अभिनेता शाहसित पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष र त्यसपछिको ३० वर्षका सिनेमाबारे बहस :
म ‘आमा’भन्दा दुई वर्ष मात्र कान्छो छु
‘नेपालमा गुठीव्यवस्था', ‘इतिहासका थप पृष्ठहरू’ जस्ता दर्जनौँ कृतिका लेखक डा. गोविन्द ‘टण्डनसित पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष र त्यसपछिको ३० वर्षका संस्कृतिबारे बहस :
खै संस्कृति ? विकृतिको बाढीमा बगिगयो !
बिहार विधानसभा निर्वाचनमा यसपटक अनौठो संयोग देखापरेको छ । त्यो के भने लालुप्रसाद यादव बिहार निर्वाचनको केन्द्रमा छैनन् । ७२ वर्षे यादव पछिल्लो समय जेलमा छन् । अर्का पाका नेता राम विलास पासवानको भर्खरै निधन भयो । र, ६९ वर्षे नेता नितिश कुमार आफ्नो राजनीतिक करिअर जोगाउन यो निर्वाचनमा होमिएका छन् ।
बिहारमा विधानसभा निर्वाचनले तय गर्ने बाटाे
पाँच वर्ष अगाडि फ्रेन्च म्यागजिन चार्ली हेब्डोले प्रोफेट मोहम्मद सम्बन्धी कार्टुन छाप्दा मुस्लिम मुलुकहरुमा व्यापक विरोध भयो । त्यतिमात्र होइन, चार्ली हेब्डोकै कार्यालयमा पनि आक्रमण भयो । पाँच वर्षपछि पनि त्यही कार्टुनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल मचाउने अपेक्षा कसले गरेको थियो होला र ? तर भयो, त्यस्तै ।
मुस्लिम मुलुकसँगको संघर्षमा माक्रोन
पछिल्लो वर्षहरूमा रुसलाई अमेरिकादेखि यूरोपका अन्य मुलुकहरूको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । हुनपनि रुस पछिल्लो समयमा निकै सक्रिय बनेको देखिएको छ । भ्लादिमिर पुटिन नेतृत्वको रुसले क्रिमियालाई आफुमा बिलय गरायो । सिरियाबाट अमेरिकालाई बाहिर धकेल्यो । रसियन भाडाका सिपाही भेनेजुएलादेखि अफ्रिकासम्म पुर्‍याएको छ ।
रुसको शक्ति : भ्रम कि यथार्थ?
गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सांसद् र मन्त्रीहरुले यस वर्ष पनि दसैँ भत्ता लिने विषय बहुविवादित बन्यो । कोभिड-१९ संक्रमितहरुको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद्, मन्त्रीहरुको दसैँभत्ता कटौतीको निर्णय भने गरेनन् । सार्वजनिक आलोचना हुनुअघि सांसद् र मन्त्रीहरुले कोरोना महामारीको समयमा हामी भत्ता लिदैनौं भनी केहीबाहेक धेरैले स्वेच्छिक त्याग गर्न सकेनन् । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र अन्य सदस्यले कोराना कोषमा राख्ने निर्णय लियो ।
सत्ताको दसैँ भत्ता
कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९) ले सामाजिक उद्यमशीलतालाई एउटा अपरिहार्यतामा रुपान्तरण गरेको छ । कोभिड-१९ ले विश्वव्यापी बदलावलाई तीव्र बनाएको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र सर्वव्यापी बनाउँदै जबर्जस्त रुपमा नयाँ प्रचलनहरु भित्र्याइरहेको छ । समाजिक असमानताहरु र असुरक्षालाई अझै चर्काएको छ ।
विस्तारित सामाजिक पुँजीवाद
संस्मरण-आत्मकथाहरु फुटकर वा किताबका रुपमा बग्रेल्ती छापिइरहेका छन् । यस्ता धेरैमा मपाइँत्व हुन्छ भन्ने आरोप पनि छ । हामी यो कन्फेसन स्तम्भमा आफ्ना कमी-कमजोरी केलाइएका, आफ्ना भूल-भ्रम स्वीकार गरिएका पाठ-लेख-वार्ता प्रकाशन गर्नेर्छौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका गन्यमान्य मात्र हैन, यसमा सबैका कन्फेसन छापिनेछ । सहभागिताका लागि हामी यहाँहरुलाई आह्वान गर्छौं ।
मदनमणि दीक्षितका स्वीकारोक्तिहरु
दिनहरू खासै रमाइला थिएनन् । आफैँलाई खर्लप्प निल्लाजस्तो उदासी थियो तर समय यस्तो थियो, उदास हुने फुर्सद पनि थिएन । घरमा जतिबेलै कामहरू छरिइरहेका हुन्थे ।
अपार काम ! असीमित थकान !
“बाँच !”, उनले भनिन्, “तर अनन्तसम्म झुन्डिएर !”, यो कथा टुङ्गिन्छ, त्यहींबाट अर्को यथार्थ शुरु हुन्छ ।
तिम्रो मीत अधुरो, तिम्रो गीत अधुरो, तिम्रो स्वर अपुरो, नेपाली स्वर संसार अधकल्चो । तिमीले आफू सँगसँगै धेरैधेरै पूर्णता लिएर गयौ– यहाँ केवल अधुरा, अपूरा, अधकल्चा र आधा छोडेर ।
नारायण गोपाललाई स्वरसम्राट घोषणा गरेको त्यो ऐतिहासिक लेख
‘प्रत्येक रुखको पात हरियो हुन्छन तर प्रत्येक हरियो फरकफरक हुन्छन् । एउटै रूखको पात पनि टुप्पाको पात र फेदको पातको हरियो फरकफरक हुन्छन् । ऋतुअनुसार पनि तिनको हरियो फरकफरक हुन्छन् । संसारको सबैभन्दा महान् चित्रकार प्रकृतिमा हरियो नै हजार किसिमका होलान् । प्रत्येक हरियोलाई शब्दमा भन्न सकिँदैन । किनभने प्रत्येक हरियोको नामै छैन,’ उनी भन्छन्, ‘शब्दले भन्न नसकेको कुरा रङले भन्न सक्छ । चित्रपटमा रङको सुन्दर बगैँचा बनाउने कुशल चित्रकारले भन्न सक्छ । कतिपय शब्दमा अव्यक्त कुरा चित्रमा र चित्रमा अव्यक्त कुरा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले साहित्य र चित्रकला साक्खै दिदीबहिनी हुन् । या तपाईं साक्खै दाजुभाइ पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।’
भाेटाहिटीका कृष्ण मानन्धरसँग अमर न्यौपानेले सिकेकाे चित्रकला
पैताला मेरो मनले खाएको मनप्रिय पुस्तक हो । किनभने यसलाई एउटा जोगीले लेखेको हो ।
जोगीले लेखेको यो पुस्तकलाई मैले केही वर्षयता बर्थ–डे–बुक बनाएको छु । यो पुस्तक ‘जन्मदिनको उपहार’ भएको छ । कहीँ–कतै–कुनै हितैषी एवम् प्रियजनको जन्मदिन हुँदा–पर्दा पैताला अघि सार्ने गरेको छु ।
एउटा जोगीको अधुरो बहीखाता
कलाकारितामा आउनुअघि अभिनेता बुद्धि तामाङले अनेक संघर्ष गरेका छन् । कहिले इट्टा बोक्ने काम गरेका छन् त कहिले बदाम बेच्ने, कहिले पत्रिका बाड्ने त कहिले गेष्ट हाउसमा भाडा माझ्ने ।
संघर्षले खारिएका यिनै बुद्धिलाई सूत्रन्यूज डटकमले आफ्नो अफिसियल युट्युब सूत्र टिभीको नयाँ कार्यक्रम ‘नोस्टाल्जिया : एक मान्छे एक इतिहास’ को दोश्रो एपिसोडका लागि भक्तपुरस्थित एक इट्टाभट्टा लिएर गयो । जहाँ उनी आफ्ना पुराना दिनहरु सम्झिएर ‘नोस्टाल्जिक’ भए ।